लघुकथा : साइबर संवाद | NepalDut
डा घनश्याम परिश्रमी भैरहवा
सुमुखी, तपाईं कति सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ छन्दमा! अझ वाचन कला त मनमाेहक । म तपाईंको फ्यान नै हुँ ।
मेरो प्रशंसाले सुमुखीकाे अनुहार चम्किलाे देखिन्छ । उनी मख्ख मात्र होइन गजक्क पर्दछिन् । अनि यसरी बाेल्छिन् – धन्यवाद , सबैले यस्तै भन्छन् । तपाईंले भनेजस्तै ।
हेहेहे, तपाईं पनि कस्तो मान्छे समुद्र ! तातै खाऊँ, जल्दै मरूँजस्ताे कुरा गर्नुहुन्छ । यसका लागि एकदुई दिन पर्खनुस् ।
सुमुखी-हेहेहे, तपाईं पनि कस्तो मान्छे समुद्र ! तातै खाऊँ, जल्दै मरूँजस्ताे कुरा गर्नुहुन्छ । यसका लागि एकदुई दिन पर्खनुस् ।
एकदुई दिन भनेको के ? तीनदिनपछि ? अँहँ, मलाई भाेलिदेखि तपाईंले भिडियोबाट नै क्लास लिनुपर्छ, बुझ्नुभयो । मेरो दबावमूलक भाषाले उनको अनुहारमा झनै विरूपता थपिन्छ । अाे के बाई, शुभरात्रि, यत्ति भन्दै भिडियो अफ गर्छिन् उनी।